Haleellaa Kiraayisticharch: Lammiileen Niwuuziilaand meeshaa waraanaa mootummaatti deebisan - BBC News Afaan Oromoo
Haleellaa Kiraayisticharch: Lammiileen Niwuuziilaand meeshaa waraanaa mootummaatti deebisan
Lammiileen Niwuuzilaandi meeshaa hidhatanii jiran deebisanii mootummaatti galii gochuu eegalan.
Meeshaa deebisuun kun haleellaa Masjiida magaalaa Kiraayisticharch keessatti argamu irra ga'e booda akkaataa walii galtee irra ga'ameen raawwatamaa jira.
Haleellaan kun Masjiidarrati kan raawwatame Bitootessa darbe yoo ta'u namoonni 250 ta'an ajjeefamaniiru.
Sagantaa meeshaa waraanaa walitti qabuu har'a eegalame kanaan meeshaaleen waraanaa 250 ta'an galii taasifamu.
Amantoonni Islaamaa addunyaa haleellaa masjiidota Niw Ziilaand balaaleffatan
Hanga ammaatti namoota 169 meeshaalee waraanaa 224 dabarsanii mootummaatti kennaniif maallaqi doolaara Niwuuziilaandi 433,600 kaffalameeraaf.
Meeshaaleen waraanaa walitti qabamanis yogguma sana barbadeeffaman.
''Hawaasni hidhate haala kanaan seera waliigaltee meeshaa galii gochuu kabajuunsaa waan abdiinamaaf kennuudha. Kun hawaasa sadarkaansaa fooyya'e ta'uu akka agarsiisu poolisiin ni hubata. Deebiin hawaasarraa argachaa jirru waan nama jajjabeessuudha,'' jedhu Komaandarri naannawa kanaa Maayik Joonsan.
Akka komaandar Joonsanitti namoonni meeshaa hidhatan lakkoofsaan 900 ta'an meeshaalee waraanaa 1,415 deebisuuf tole jedhaniiru.
Meeshaa ittiin adamoo adamsaa ture kan deebise namni maqaansaa akka hin eeramne gaafate tokko doolaaraa Niwuuziilaandi 13,000 argachuusaatti gammachuu qabu ibsa.
"Hojiin kun sirrii miti jechaan ture. An akka dhuunfaa kootti itti gammadaa hin turre. Garuu, boodarra haala gaariidhaan hojjechuu eegalan. Amma baayyee gammadeera,'' jechuun gaazexaa Niwuuziilaandi Heeraalditti himeera.
Garuu namni hundi gammachuu hin qabu.
Meeshaa waraanaa waggaa 100'f qabatame akaakayyuu isaarraa dhaale dabarsee kennuun doolaara 150 kan argate jiraataan magaalaa Kiraayistcharchii Viinsant Saandars TV Niwuuziilaanditti akka himetti murtee kanatti hin gammadne waan ta'eef callisee dhiiseera jedha.
''Utuu nuti itti hin qophaa'in adeemsa hojichaa xumuran. Meeshaalee waranaa harkaa qabnu akka deebisnuuf guyyaa lama qofa nuuf kennan, nu dirqamsiisaa turanis,'' jedhe
Walii galatti, sagantaa kanaaf mootummaan maallaqa doolaara Niwuuziilaandi miiliyoona 208 qabateera.
Rifoormiin meeshaa waraanaa biyyattii akka fooyya'uuf kan murtaa'e Ebla darbe ture.
Akkaataa rifoormii haaraa kanaan loltoota biyyattiirraan kan hafe namni kamuu meeshaa waraanaa qabachuu hin danda'u.
Suuraan shamarree Musliimaa warra Islaamummaa morman duratti suuraa kaate ijoo dubbii taheera